Raj Ghale - ghale-rajs jimdo page!
शँका र अबिश्वास
शँका र अबिश्वासले भरिएको हृदय जीवनमा सफलताको लछ्य प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छ । जिवनको अमुल्य सिदान्त यो हो कि यदि आफ्नो सफलता प्रती शँका गर्न थालिन्छ भने कहिले पनि पूर्ण सफलता पाउन सकिदैन । ठीक यसैगरी जसरी आकाश तिर ढुँगा फ्यक्दा त्यो ढुङ्गा आकाश तिर नगइकन भुइ तिर खस्छ ।
आत्मबिश्वासको अभाबमा भगवानले पनि मानिसको मद्घत गर्न सक्दैन । सफलता प्राप्त गर्न काम प्रती भरोसा राख्न जरुरी छ । जुन मानिसमा आत्मबिश्वासको कमी हुन्छ वा सफलता प्रती आफ्नो मन मा शँका हुन्छ त्यो मानिस कहिले पनि सफल हुँदैन । सफलता पहिला मनमा आउनु जरुरी छ जब आफ्नो मननै सफलता प्रती शँकाले भरिएको छ त सफल कसरी हुन सकिन्छ ।
आत्मबिश्वासी र आत्मबिश्वासहिन ब्यक्तिमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ । एउटाको बाटो सफलता तिर लम्किन्छ भने अर्कोको बाटो पराजय तिर । हामीमा आत्मबिश्वास जती जती बढ्दै जान्छ कार्य सक्ती पनि उती उती निखारिदै आउछ । त्यसैले आफ्नो विश्वाश लाई द्रिढ राखु पर्छ । जुन कुरामा पनि शँका र अबिश्वास गरेर हेर्नु हुँदैन । शँका र अबिश्वासलाई मन बाटनै त्याग्न सके जीवन अबस्य पनि सफलता तिर अग्रसर हुन्छ ।
सपना र इच्छाहरु
यस्तो को मानिस छ जसले सपना देख्दैन , इच्छाहरु पाल्दैन ? संसारमा कोही पनि मानिसहरु यसको अपबादमा छैन । सडकमा कुष्ठ रोगले ग्रस्ट रोगी भिखारी पनि महलको राजकुमारको सपना देख्छ र यो कल्पना गर्छ कि महलको शानदार जीवन ब्यतित गरी रहेछ । सपना र इच्छाहरुलाई कसैले रोक्न सक्दैन । धनी होस् या गरीब सपना सबैले देख्छ इच्छाहरु सबैले राख्छ । सपना र इच्छाहरु बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन ।
यही सपना र इच्छाहरुले नै मानिसलाई जिवित राख्छ र हर प्रकारले सपनाहरु र इच्छाहरुलाई पुरा गर्न प्रयत्नशिल रहन्छ र यसैले आफ्नो जीवन जिउन र संघर्श गर्न प्रेरणा दिन्छ । मानिसको सपना र इच्छाहरुको कुनै सिमा छैन , एउटा सपना वा इच्छा पुरा हुन्छ त फेरी अर्को सुरु हुन्छ । हामी सपना र इच्छाहरु राख्छौ जब हामी आफ्नो भन्दा धेरै खुशी सम्पन्न मानिसलाई देख्छौ र हामीमा इर्ष्या पलाउछ । हामी पनि त्यो मानिस झै सुख सम्पन्न हुन चाहन्छौ र जब त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनौ हामी परिस्थिती सँग हार मन्छौ । यो सोच्न थाल्छौ कि सबै आफ्नो आफ्नो भाग्यको खेल हो । त्यो मानिसको भाग्यमा सबै लेखेको छ मेरोमा छैन ।
बस्तुत: यो भाग्य शब्दले मानिसलाई सबै भन्दा भ्रममा राखेको छ , गुमराह गरेको छ । अधिकाँस मानिसहरुलाई यो कुरा दिमागमा बसेको छ कि जो भाग्यमा लेखेको छ त्यो मात्र पुरा पाईन्छ , बिना भाग्य केही पनि पाइदैन । सुख सम्पत्ति सबै भाग्यकै खेल हो । मान्छे भाग्यको अधिनमा छ । अत: हामीले आफ्नो सारा सपना र इच्छाहरुलाई भाग्यको हातमा सुम्पेका छौ । सपनाहरु पुरा हुनु नहुनु भाग्यमा निर्भर रहेको सोच्छौ ।
तर्कको गहिराइमा र व्यबहारको जीवनमा भाग्य सम्बन्धी धारणाहरु एकदम झुठो पाइएको छ । यस्तो धेरै मानिसहरु यो संसारमा छन जसको हातमा न भाग्य रेखा छ न सुर्य रेखा । यसको बाबजुद ति मानिसहरुको जीवन सुखी सम्पन्न र सम्रिद्द छ । धेरै जसो मानिसहरुको हातमा जीवन रेखा सम्म छैन तर त्यही मानिस लामो आयु बाँचेको पाइएको छ ।
त्यसैले हामीले यो कुरा गहिरिएर सोच्नु आवश्यक छ कि हस्तरेखा र भाग्य केही पनि होइन, यसबाट जीवनमा केही पनि प्रभाब पर्दैन । हाम्रो सपनाहरु र इच्छाहरुमा भाग्यले कुनै प्रभाब पार्दैन । यसो त यो कुरा प्रमाणित भई सकेको छ कि कर्मले भाग्य बनाउछ । त्यसैले मानिसहरुले आफ्नो सपनाहरु र इच्छाहरु आफ्नो सामर्थ छ भने अबस्य साकार गर्न सक्छ , त्यसलाई पुरा गरेर देखाउन सक्छ....
आत्म विश्वासको फल
सभ्यताको आस्चर्यजनक बिकासको ईतिहास उनिहरुको अनगिन्ती ज्ञात अज्ञात प्रयत्नको फल हो । जसले अनेक समस्याहरु सँग लडेर मनुस्यलाई ढुङे युगबाट निकालेर आजको रकेट्को युग सम्म लिएर आएको छ । यिनै कर्मठ मानिसहरुले जे कष्ट गरेको छ जे समस्या भोगेको छ , के हामीले त्यस्को कल्पना मात्र गर्न सक्छौ ? कती कष्ट गरेर उनिहरुले हामीलाई त्यो जङली ढुङे युग बाट अहिलेको कम्प्युटरको युग सम्म ल्याइ पुर्याएको होला । यती यि कर्मठ मानिसहरु आफ्नो मुक साधाना नलागेको भए के आजको मनुस्यको यो रुप हुन्थ्यो त ?
सफलता घर बसेर पाइदैन । सफलता पाउनको लागि ढ्रिढ आत्म विश्वासको आबस्यक्ता पर्दछ । प्रक्रिती स्व्यमले हामीलाई यो कुराको शिक्षा दिन्छ कि सफलताको रहस्य के हो ? कुनै रुखलाई उम्रिन पहिले बिउ छर्न आवश्यक छ , त्यसै गरी सफलता पाउनको लागि पहिला त्यस्को बिउ छर्न आवश्यक छ । हाम्रो सम्पूर्ण ज्ञान, योग्यता यदी हामीमा आत्मबिश्वास छैन भने सबै ब्यर्थ हो , आत्मबिश्वासको अभाबमा त्यो योग्यता र ज्ञानले कहिले साथ पाइदैन ।
यो कुरालाई अबस्य मनन गर्नु आवश्यक छ कि छोरी भएको धन पाउन सकिन्छ , कठिन देखी कठिन रोगको उपचार सम्भब हुन्छ तर आफ्नो आत्मबिश्वास हरायो भने त्यो पाइने छैन । आत्मबिश्वासले नै सफलताको सबैभन्दा ठुलो शक्ती हो ।
संसार आँफै बदलिने होइन त्यसलाई बदल्नु पर्छ जब हामी त्यसलाई बदल्ने कोशीस गर्छौ तब न यो सम्भब हुन्छ । यदी मानिसमा आत्मबिश्वास रुपी शक्ती छ भने जे पनि गर्न सक्छ । संसारमा यस्तो कुनै काम छैन जो मानिसले गर्न सक्दैन । मानिसले सबै गर्न सक्छ त्यसको यथेस्ट प्रमाणहरु हाम्रो सामु छ ।
मह बनाउने माहुरीसँग जो पनि परिचीत छन । सबैलाई यो राम्रो सँग थाहा छ कि माहुरिले कसरी तिल तिल गरेर मह जम्मा पार्छ । माहुरीले कही बाट एकै चोटि मधुको भन्डार पाएको हुँदैन । उसको चाकामा भरिएको मह उसको मेहनतको परीणाम हो । त्यसै गरी तपाईंले पनि तिल तिल गरेर सफलताको मह जम्मा गर्नु छ । कसैले तपाईंलाई सफलता तपाईंको हातमा दिन आउने छैन । मह बनाउने माहुरीले झै परीश्रम गर्ने बारे सोच्नुस् सफलताले तपाईंको कदम अबस्य चुम्नेछ परीश्रम कसरी र कती गर्ने त्यो तपाईं आफुमा भर पर्छ , जती धेरै परीश्रम त्यती धेरै सफलता हात पर्ने निशित छ । परीश्रमको साथ साथमा आफुमा आफ्नो परीश्रम प्रती विश्वाश हुनु पनि जरुरी छ । विश्वासको आफ्नै महत्व छ ।
विश्वास एउटा चमत्कारको नाउ हो । जब विश्वास गहिरो सँग आफ्नो मनमा बस्छ तब अबस्य फलदायी नतिजा निस्किन्छ । जब सम्म आफुमा विश्वास हुँदैन हामी केही गर्न सक्दैनौ । पहिला आफुमा विश्वास गर्न सिकौ अनी मनमा प्रशन्नता लिएर परीश्रम गरौ ।
प्रशन्नता ईश्वरले दिएको एक उच्चकोटिको बरदान हो । यसले मानिसलाई अतिरिक्त सक्ती प्रदान गर्छ । प्रशन्नतालाई जब विश्वासको साहारा मिल्छ तब एउटा नयाँ शक्तिको उत्पती हुन्छ । विश्वास एक प्रकारले राम बाण जस्तै हो । अटुट विश्वास जीवनको हरेक इछ्या पुरा गर्न मदतगार साबित हुन्छ । विश्वास एक चमत्कारी भावना हो । यदी आफुलाई विश्वास छ कि अमुक कार्य भएरै छाड्छ त्यो काम प्रयत्न गरेमा अबस्य पुरा हुन्छ । विश्वासले मानिसलाई बल दिन्छ, शक्ती दिन्छ, काम गर्ने क्षमता दिन्छ । यदी आफुलाई विश्वास छैन त्यो काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर भने उक्त काम गर्ने इछ्या हुँदैन प्रयत्न गरिदैन र त्यो काम कहिले पुरा हुँदैन । त्यसैले आफुले आफुलाई विश्वास गर्ने बानी बसालौ ।
यो लेखलाई राम्ररी बुज्नुहोल।
के ले हामीलाई अघी बढन रोकिएरहेको छ?
तपाईं आफ्नो गाडीमा ब्रेक लगाएर कुदाउनु भयो भने के हुन्छ? तपाईं आफ्नो पूर्ण गतिमा जान सक्नु हुन्न। किन भने ब्रेकल रोकावट ल्याउछ। तपाईंको कार बिग्रिन जान्छ। यदी बिग्रिएन भने इन्जिन्लाई खराबी पुराउछन।
हाम्रो जिबन १० वटा गिएर भएको साइकल जसतै हो हामीहरु मध्य धेरै आफु सँग भएको गिएरहरुको कहिल्यै प्रयोग गर्दिनौ।
१ खतरा मोल्ने अनिच्छ। (unwilling to take risk
२ प्रयत्नशिलताको कमी lake of persistance
३ तत्काल सन्तुश्टी instant Gratfication
४ प्राथमिकताको कमी lake of priorities
५ छोटो बाटोको खोजी Looking for short ways
सितैमा खाना भेटिन्दिन । सजिलो लाग्ने उपाय वास्तवमा काठइन हुन्छ। हेर्नेहरु तुरुन्तै उपायको खोजी गर्दछन।
6 स्वार्थ र लोभ selfishness and Grefed लोभको अन्त्य कहाछ?
7 द्रिढ विश्वासको कम lake of conveication द्रढ यो संसारमा3प्रकारका मान्छेहरु छन
क,आफ्नो काम आफै गर्नेहरु
ख, काम भएको हेरेर बस्ने मान्छेहरु
ग, के भएको हो भनेर छक्क पर्ने मान्छेहरु,
तपाईं हामीहरुको माथिको कुन बर्गमा पर्छौ मुल्याकङ्कन गरौ।
8 प्रकृतिको नियम बुझाईमा कमी lake of understanding of natures law प्रकृतिले हामीलाई जहिले पनि सन्केत दिएरहेको हुन्छ। उसले बारम्बार शन्केत दिएरहन्छ र अचानक हामी त्यो सन्केत बुझ्न सक्छौ?
9 योजन बनाउन र तयार गर्न आनच्छ unwillingness to plan and prepare सबै मान्छे सँग जित्ने इच्छा हुन्छ तर थोरै मान्छे सँग मात्र जित्त्नाको लागि इश्छा हुन्छ। धेरै मान्छेहरु आफ्नो जिबनको बारेमा योजन बनाउनु भन्दा बिदा र भोजकै योजन बनएर जिबन बिताउछन.
कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न पूर्ण तयारी गर्न अत्याबश्यक छ.
सर्बप्रथम तयारी: उदेश्य + योजन + अभ्यास + निरन्तर + धर्य + गर्ब
बाणिज्यशास्त्रको बिकासक्रम र बिकासअक्रमको औचित्य र प्रयोग।
प्रिथ्बीको सिमित साधन र श्रोतलाई परिचालन गरी अरबौ मानिसहरुको इच्छा र आवश्यकता पुर्ती गर्नका लागि हाम्रा पुर्खाहरुले अपनाएको बिधिलाई कलान्तरमा कमर्श तथा बाणिज्यशास्त्र नाम दिएयो र विश्वका प्रख्यात विश्वाबिध्यालयहरुमा अध्ययन अध्यापन हुन थाल्यो।
बाणिज्यशास्त्र ब्यापारमा निम्न अनुसारका बिकास क्रमहरु देखिए।
क, साधारण ब्यापारको युग simple Trade era
ख, उत्पादनको युग production era,
ग, बिक्रिको युग sales era
घ, बजार ब्यवस्थापना बिभागको युग: marketing department era
ङ्, बजार ब्यवस्थापना कम्पनिको युग: Marketing Company Era
सोही बजार ब्यपस्थान कम्पनिको युग अन्तर्गत निम्न धारणा तथा प्रयोगहरु चलन चलतिमा आएका छन।
(१) बितरक कम्पनिको धारणा Marketed by concept
(२) प्रत्यक्ष बिक्रिको धारणा Direct seling concept
सोही प्रत्यक्ष बिक्रिको धारणा अन्तर्गत निम्न धारणाहरु देखिए।
(१) बिद्युतिय ब्यापार E-Commerce
(२) टेलिभिजन द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री T.V shoping Tele Marketing, Sky-shoping उपभोक्त बितरक बजार ब्यबस्थान सच्जाल consumer-Distributor-Networking-Marketing